Malunga nathi - Beijing SINOVO International Trade Co., Ltd.
Iqela le-SINOVO ngumboneleli oqeqeshiweyo wezixhobo zoomatshini bokwakha kunye nezisombululo zokwakha, ezibandakanyeka kwicandelo loomatshini bokwakha, izixhobo zokuhlola, ukungenisa kunye nokuthumela kumazwe angaphandle iarhente yemveliso kunye nokubonisana ngeskimu sokwakha, ibisoloko ikhonza abathengisi boomatshini bokwakha kunye nababoneleli bamashishini okuhlola.
Kwangoko kwiminyaka yoo-1990, amalungu omqolo wenkampani ebesebenza kwicandelo loomatshini bokwakha. Emva kweminyaka engaphezu kwama-20 yophuhliso kunye ezintsha, inkampani iye yasekwa ixesha elide umfelandawonye qhinga intsebenziswano kunye abenzi izixhobo ezininzi phezulu ehlabathini kunye nabenzi izixhobo ezaziwayo-kakuhle e-China, kwaye iphumelele iimbasa ezininzi ngoomatshini zobunjineli kunye neeprojekthi izixhobo kumazwe China iminyaka emininzi.
Ubungakanani beshishini leqela le-SINOVO ligxile ikakhulu koomatshini bokwakha imfumba, ukuphakamisa, ukubhola kakuhle kwamanzi kunye nezixhobo zokuhlola i-geological, ukuthengisa kunye nokuthumela ngaphandle koomatshini bokwakha kunye nezixhobo, kunye nesisombululo soomatshini kunye nezixhobo. Iseke ubudlelwane bezorhwebo kunye namazwe angaphezu kwe-120 kunye nemimandla emhlabeni, isenza ukuthengisa, inethiwekhi yenkonzo kunye nepateni yokuthengisa eyahlukeneyo kumazwekazi amahlanu.
Zonke iimveliso zifumene i-ISO9001: 2015 isatifikethi, isatifikethi se-CE kunye nokuqinisekiswa kwe-GOST.Phakathi kwazo, ukuthengiswa koomatshini bokuthengisa yinto yokuqala e-China kwimarike yase-Asia-mpuma ye-Asia, kwaye iye yaqhubeka yaba ngumthengisi ogqwesileyo waseTshayina kwishishini lokuhlola laseAfrika. Kwaye eSingapore, eDubai, iinkonzo zeoyilo zeAlgiers, ukubonelela ngetekhnoloji yehlabathi kunye nezinto ezisemgangathweni zokubonelela ngenkonzo esemva kwentengiso.
Kwasekuqaleni kweminyaka yee-1990, amalungu omqolo weqela le-SINOVO ebekhonza kwicandelo loomatshini bokwakha. Emva kweminyaka engaphezu kwama-20 yophuhliso kunye ezintsha, inkampani iye yasekwa ixesha elide umfelandawonye qhinga intsebenziswano kunye abenzi izixhobo ezininzi phezulu ehlabathini kunye nabenzi izixhobo ezaziwayo-kakuhle e-China, kwaye iphumelele iimbasa ezininzi ngoomatshini zobunjineli kunye neeprojekthi izixhobo kumazwe China iminyaka emininzi.
Kwi-2008, inkampani yenze umanyano lobuchule kwaye yamisela inkampani ye-TEG FAR EAST eSingapore ukomeleza ukukhula kwemakethi ye-Southeast Asia.
Ngo-2010, inkampani imali kwimveliso kunye nesiseko imveliso Hebei Xianghe kummandla kushishino ukubonakalisa imiboniso, egubungela ummandla 67 mu, kunye notyalo-mali iyonke yuan million 120, benza R & D kunye nokuveliswa imfumba zobunjineli oomatshini, bayiphakamisa Ukugrumba kakuhle kwamanzi kunye nezixhobo zokuhlola umhlaba Umzi mveliso ubekwe eXianghe Industrial Park, 100 km ukusuka kwizibuko laseTianjin, ukunciphisa iindleko zothutho.
I-Beijing Sinovo International kunye ne-Sinovo Heavy Industry Co. Ukususela ekuqaleni kwethu, sizibophelele ekuboneleleni izixhobo zokomba ezikumgangatho ophezulu kubathengi behlabathi. Siyabulela kwimizamo yethu kule minyaka, siye saseka isiseko semveliso esithatha indawo ye-7, i-800 yeemitha zesikwere kwaye ixhotywe ngezixhobo ezingaphezu kwe-50. Ukwanelisa iimfuno ezandayo zemarike, sihlala sisebenzela ukwandisa amandla emveliso. Ngoku imveliso yethu yonyaka yokumba izixhobo eziyintloko zii-1, 000 iiyunithi; iirigs zokumba amanzi kakuhle ziiyunithi ezingama-250; kwaye iirobhothi zokomba ezijikelezayo ziiyunithi ezili-120. Ukongeza, ngenxa yokusebenza nzima kweenjineli zethu eziqeqeshiweyo, siphambili kwicandelo lolawulo lwe-hydraulic kunye neenkqubo zokuqhuba, ezinceda ukugcina izixhobo zethu zokomba zikhuphisana kwintengiso. Inkampani yethu ibekwe kwisixeko Beijing, ikomkhulu China. Apha sinokufikelela kwezothutho olufanelekileyo, ubuninzi bezinto zokusebenza, kunye netekhnoloji ephezulu. Oku kuququzelela ukuveliswa nokuthunyelwa kweemveliso zethu kwaye kusivumela ukuba sizinike ngamaxabiso asezantsi.
Njengomenzi osisigxina osembiwa e-China, Iqela le-SINOVO lenza ushishino ngegama kunye nelizwi lomlomo. Sizinikezele ukubonelela abathengi ngenkonzo egqibeleleyo. Ukwenza abathengi bazive bekhuselekile ekusebenziseni iimveliso zethu, simisela inkqubo epheleleyo yasemva kwe -sales, kwaye sinikezela ngewaranti yonyaka omnye kwiirigs zethu zokomba. Ngexesha lewaranti, sinikezela ngokusombulula simahla, ngoqeqesho lomqhubi kunye nenkonzo yolondolozo. Ukongeza, sikwanikezela ngezixhobo zasimahla. Njengamacandelo ethu aphambili angeniswa evela kwiinkampani ezidumileyo zehlabathi, abathengi bethu baphesheya banokugcina ezi zinto ngokulula.
1. Kwimveliso nganye, siya kubonelela abathengi ngolwazi ngemveliso efanelekileyo kunye nolwazi lobuchwephesha ukuqinisekisa ukusetyenziswa kwemveliso.
2. Ngokwezivumelwano zethu zorhwebo, siya kuthumela izixhobo zokomba ngexesha.
3. Zonke izixhobo kufuneka ziye kuvavanyo olungqongqo kunye novavanyo oluphindaphindiweyo ukufezekisa iimfuno zabathengi.
4. Iimveliso zethu zinokuhlolwa ngumntu wesithathu. Zonke iimveliso zerig ziya kuphuculwa ngokweemfuno zabathengi.
Inkonzo ngaphakathi kweNtengiso
1. Siza kujonga imeko yabathengi bethu. Sihlala sinxibelelana nabathengi bethu kwaye sibandwendwela amaxesha ngamaxesha.
2. Ukuxhamla abathengi bethu, besilungisa iimpahla.
3. Ixesha lethu lokuhambisa alide, malunga neentsuku ezili-10 ukuya kwezi-15. Xa imveliso kufuneka iphuculwe ngokweemfuno zabathengi, ixesha lokuhambisa liya kuba lide.
1.Sibonelela ngeveki enye ukuya kwezimbini zenkonzo esizeni kunye neenkqubo zoqeqesho kubathengi bethu.
2. Amalungu okunxiba aqhelekileyo aya kutshintshwa simahla ngaphandle kwithuba lewaranti.
3. Ngomonakalo ongaphaya kwenqanaba loxanduva lwethu, sinokunika isikhokelo sobuchwephesha ngokweemfuno zabathengi, ukwenzela ukulungisa okanye ukubuyisela ezintsha.
Sineqela eligqibeleleyo elikhokelayo, elisebenza kwimveliso kunye nasekuthengiseni oomatshini bokwakha kunye nezixhobo ngaphezulu kweminyaka engama-30. Amava oshishino lwangaphandle abanamava kunye neqela lobuchule emva kokuthengisa.
Iqela le-Sinovo likugqala kubaluleke kakhulu kuqeqesho lwabasebenzi kunye nophando lwetekhnoloji kunye nophuhliso, ineziko lobuchwephesha kwezophando kunye neqela lophuhliso, kwaye lifumene inani leeprojekthi zamalungelo awodwa omenzi wechiza.
Iklasi yabathengi isatifikethi
Isatifikethi selungelo elilodwa lomenzi wechiza (1)
Isatifikethi selungelo elilodwa lomenzi wechiza (2)
Isatifikethi selungelo elilodwa lomenzi (3)
Isatifikethi selungelo elilodwa lomenzi (4)
Isatifikethi selungelo elilodwa lomenzi (5)
Isatifikethi selungelo elilodwa lomenzi (6)
ISIQINISEKISO (Isatifikethi se-TR）